MM Tarot Lenormand: ဖဲဗေဒင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
ဖဲဗေဒင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၁)
Cartomancy ဆိုတဲ့ ကစားစရာဖဲချပ် (Playing Card) တွေကို ဖတ်ပြီး အနာဂတ်ကို ဖော်ထုတ် အဖြေရှာတာဟာ စုန်းတွေ၊ ဂျစ်ပစီတွေ၊ နိမိတ်ဖတ်ဆရာတွေ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်ရာပေါင်းများစွာ ကတည်းက အသုံးပြုလာတဲ့နည်းပါ။ သာမန် ကစားတဲ့ ဖဲချပ်တွေဟာ သူ့ရဲ့ မိခင်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ တားရော့လောက် သင်ယူစရာ... လေ့လာစရာ မကောင်းတာတော့ အမှန်ပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း ကလေးငယ် တစ်ယောက်ရဲ့ နှုတ်က လွတ်လပ် ပွင့်လင်းတဲ့ အတွေးအမြင်တွေ ကို ကြားရသလိုပါပဲ... သာမန်ဖဲထုပ်တစ်ခုနဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖတ်ကြားတာဟာ တနည်းတဖုံတော့ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းပါတယ်လို့ ယူဆပြီး တချို့ နိမိတ်ဖတ်ဆရာတွေက အသုံးပြုနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သာမန် ဖဲထုပ်နဲ့ ကံကြမ္မာကို ဖတ်ကြားတာရဲ့ အားသာချက်ကတော့ အခြားသော ကံကြမ္မာဖတ် ဖဲထုပ်တွေလို ခက်ခက်ခဲခဲ ရှာဝယ်စရာ မလိုဘဲ လူတိုင်းနဲ့ လက်လှမ်းမီတဲ့ အချက်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အခြားတစ်ဘက်မှာတော့ တားရော့လိုပါပဲ သူတို့မှာ တိကျ သေချာတဲ့ စနစ်နဲ့ အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ဆိုချက်တွေ ရှိနေတယ် ဆိုတာကို သိထားသင့်ပါတယ်။ အဲဒါကို သင့်လက်တစ်ကမ်းမှာ ရှိတဲ့ သာမန် ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်ကို ယူပြီး သင်ရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ ကျွန်တော်တို့ အလွယ်တကူဝယ်လို့ ရတဲ့ Standard Deck of Playing Cards ဆိုတဲ့ သာမန် ဖဲထုပ်ကတော့ Anglo-American Playing Cards ဆိုတဲ့ အင်္ဂလိပ်နဲ့ အမေရိကန်တွေက စတင်အသုံးပြု ကစားခဲ့တဲ့ ဖဲထုပ်ပါပဲ။
အသေးစိတ်ကို သိချင်ရင်တော့... http://en.wikipedia.org/wiki/Playing_card မှာ ရှာဖွေ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
သာမန်ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်မှာ ဂျိုကာဖဲချပ်ကို ဖယ်လိုက်ရင် စုစုပေါင်း ၅၂ ချပ် ရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့ မိခင် တားရော့ဖဲထုပ်မှာတော့ Minor Arcana က ၅၆ ချပ် ရှိပါတယ်။ ကွာခြားချက်ကတော့ တားရော့ ဖဲထုပ်မှာ ပါတဲ့ Knight ကတ်ပြား ၄ ချပ်ကို သာမန် Standard ဖဲထုပ် တစ်ထုပ်မှာ ထည့်သွင်းမထားခြင်းပါပဲ။ သာမန်ဖဲထုပ် တစ်ထုပ်မှာသတ်မှတ်ထားတဲ့ အနီရောင်က နေ့ဘက်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး အနက်ရောင်က ညဘက်ကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်။
သာမန်ဖဲထုပ်မှာ ပါတဲ့ သင်္ကေတတွေနဲ့ တားရော့ သင်္ကေတတွေ ဆက်စပ်ပုံကတော့ အောက်က ပုံအတိုင်းပါပဲ။
သာမန် ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်ဟာ တားရော့က ဆင်းသက်လာတယ်ဆိုပေမယ့် သူ့မှာ တားရော့နဲ့ မတူကွဲပြား ထူးခြားတဲ့ အချက်တွေ ရှိနေပါတယ်။ တားရော့မှာ Page, Knight, Queen, King ဆိုပြီး လူရုပ်ကိုယ်စားပြုတာ ၁၆ ချပ်ရှိပေမယ့်... သာမန်ဖဲထုပ်မှာ အရုပ်ပုံ ရိုက်ထားတဲ့ ကတ်ပြား (Jack, Queen, King) စုစုပေါင်း ၁၂ ချပ်သာ ရှိပါတယ်။ အဲလိုပါပဲ တစ်နှစ်မှာ ၁၂ လ ရှိပါတယ်။ သာမန် ဖဲထုပ်မှာ ရှိတဲ့ ကတ်ပြားပေါင်း ၅၂ ချပ် (ဂျိုကာဖဲ မပါ) ဟာ... တစ်နှစ်မှာ ၅၂ ပတ် ရှိတာနဲ့ သွားပြီး တိုက်ဆိုင်ပါတယ်။
နောက်ထပ် ထူးခြားတာကတော့ အဆိုပါ လူရုပ်ပုံကတ်ပြားတွေဟာ သမိုင်းဝင် ပုဂ္ဂိုလ်တွေကို ထည့်သွင်းရေးဆွဲထားခြင်းပါ။ The King of Hearts က Charlemagne ကို ကိုယ်စားပြုပြီး the King of Diamonds ကတော့ Julius Caesar ဖြစ်ပါတယ်။ the King of Clubs က Alexander the Great နဲ့ the King of Spades ကတော့ Holy Bible ထဲက King David ကို ရေးဆွဲထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Diamond, Heart, Club, Spade ဆိုတဲ့ သင်္ကေတ လေးခုကတော့ လမင်းရဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာတွေဖြစ်တဲ့ လဆန်း၊ လပြည့်၊ လဆုတ် နဲ့ လကွယ် တို့ကို ကိုယ်စားပြုတာပါ။ ဒါ့အပြင် အဆိုပါ သင်္ကေတ လေးခုက Spring, Summer, Autumn, Winter ဆိုတဲ့ ရာသီ ၄ ခုကို ကိုယ်စားပြုတယ်လို့ အချို့က သတ်မှတ်ထားပြီး... သင်္ကေတ တစ်မျိုးဆီမှာ ဖဲချပ် ၁၃ချပ် ရှိခြင်းက ရာသီ တစ်ခုဆီမှာ အပတ်ပေါင်း ၁၃ပတ် တိတိ ရှိတာကို ကိုယ်စားပြုပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဒါ့အပြင်... ဖဲထုပ်မှာ ပါတဲ့ ကတ်ပြား ၅၂ ချပ်က နံပါတ်တွေကို ပေါင်းကြည့်မယ် ဆိုပါဆို့။ Ace ကိုတော့ နံပါတ် ၁ အနေနဲ့ Jack, Queen, King တွေကိုတော့ ၁၁၊ ၁၂၊ ၁၃ အနေနဲ့ သတ်မှတ်ပြီး ပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင် စုစုပေါင်း တန်ဖိုး ၃၆၄ (၉၁ x ၄) ရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာ တစ်နှစ်မှာ သတ်မှတ်ထားတဲ့ ၃၆၅ ရက်ထက် ၁ ရက်ပဲ လျော့တာပါ...။ ဒါကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် တချို့က သာမန် ဖဲထုပ်တစ်ထုပ်ကို တားရော့ကနေ ပြောင်းလဲပြီး ၅၂ ချပ်သတ်မှတ်ခြင်းဟာ နေနဲ့ လရဲ့ စနစ်တွေကို ထည့်သွင်းခြင်း ဖြစ်တယ်လို့ ကောက်ချက်ချကြပါတယ်။
အထက်က အချက်တွေကို ထောက်ရှုခြင်းအားဖြင့် သာမန်လက်ခံထားတဲ့ Playing Card Deck တစ်ခုဟာလည်း သာမန်မဟုတ်ဘူးလို့ ယူဆရပါလိမ့်မယ်။ အဲလိုပါပဲ ဖဲထုပ်နဲ့ ကံကြမ္မာဖတ်တဲ့အခါ သာမန်ကာလျှံကာ ဖတ်မယ်ဆိုရင်လည်း သာမန်ထက် နက်နဲတဲ့ အဓိပ္ပာယ်တွေ သိမြင်မှုတွေကို ရရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူးလို့ ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ ဒီတော့ ဖဲထုပ်နဲ့ ကံကြမ္မာ စဖတ်ကြမယ်ဆိုပါစို့... အဲလိုဖတ်မယ်ဆိုရင်... အပိုင်း ၃ ပိုင်းရှိပါလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဖဲဗေဒင်ကို ဟောကြားမယ့်သူဟာ အပိုင်း ၃ ပိုင်းစလုံးကို ကျွမ်းကျင်ရပါလိမ့်မယ်... တစ်ပိုင်းပိုင်းမှာ ရပ်ပြီး လေ့လာ ဖတ်ကြားလို့ မရပါဘူး...။
ဒီအပိုင်း ၃ ပိုင်းကို အလွယ်မှတ်တဲ့ အနေနဲ့ ကဗျာလေး တစ်ပုဒ်ကို ရွတ်ဆိုကြည့်ရအောင်...
အသဲပုံက ချစ်မေတ္တာ၊ မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းပါ
ဒိုင်းမွန်းဆိုတော့ ငွေကြေးပေါ့ စီးပွားရေးနဲ့ ဆိုင်တာပေါ့
ညှင်းပွင့်ပြိုင်ဆိုင် အလုပ်အကိုင်၊ စီမံမှုနဲ့ဆိုင်
စပိတ်ပုံနောက် ကောင်းတာပျောက် ပြဿနာတွေရောက်
တတိယအချက် မှတ်ကြပါ နည်းနည်းရှုပ်လို့ပါ
နံပါတ်တစ်ခုဆီ ရှင်းမယ်လေး တစ်ကနေ ကင်းအထိ တွေး
၁ ဆိုတာက အစပါ၊ ၂ က ဖလှယ်မှုပါဗျာ
၃ ဆိုတာက တိုးတက်မှု၊ ၄ က တည်ငြိမ်မှု
နံပါတ် ၅ က ကိုယ်ခန္ဓာ ကျန်းမာရေးလည်းပါ
နံပါတ် ၆ က လမ်းပြပေး သွားမယ့် ရှေ့ခရီးအဝေး
၇ ကျတော့ ပြဿနာ၊ ၈ က တွေးခေါ်တာ
၉ က ဆိုတာ အပြောင်းအလဲ၊ ၁၀ အဆုံးသတ်ပဲ
ဂျက်ဆိုတာက ဖြတ်လတ်တာ နုနယ် ပျိုရွယ်မှုလည်းပါ
ကွင်းဆိုတာက မိန်းမမို့ မှန်ကန်မှုနဲ့ သက်ဆိုင်လို့
ကင်းဆိုတာကျ ယောက်ျားပါ ခွန်အားကြီးခြင်းတွေရှိတာ
တစ် ကနေ ကင်း မှတ်မိညား အလွယ်တကူ ဟောပါဗျား
အထက်က သုံးချက် မမေ့အပ်ပါ ဖဲချပ်ဗေဒင် တွက်တဲ့အခါ
တစ်နေ့သုံးခါ ရွတ်ဆိုပေး အပျင်းစွဲတဲ့ ဖဲကဗျာလေး
အထက်က ကဗျာလေးရဲ့ မူရင်း အင်္ဂလိပ် ကဗျာကတော့ ဒီမှာပါ။
'For the Witch of Poor Memory'
Five is the body,
Its health and its stead,
Seven brings troubles
That Fate has assigned,
While Eight shows ideas
And thoughts in the mind.
While Kings are the symbols
Of power and men.
Queens are the emblems
Of women and truth,
A Knave isamessage,
A girl, orayouth.
နောက်အခန်းတွေမှာတော့ အထက်က အပိုင်း တစ်ပိုင်းချင်းစီကို အသေးစိတ် ဘယ်လိုကြည့်ပြီး ဟောမလဲ ဆိုတာကို ပြောပြသွားပါမယ်။
Posted by mmtarotlenormand at 1:24 AM
Labels: ဖဲဗေဒင်, မျှဝေခြင်း
ဖဲဗေဒင် အကြောင်း သိကောင်းစရာ (၂)